အမ်ဖန်လို မုန်တိုင်းကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လ...
20 พ.ค. 2563 - 21:31 น.
အမ်ဖန်ကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာ မြေတွေပြိုလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား
ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာ မြေတွေပြိုလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်း ကမ်းရိုးတန်းကို ဝင်တိုက်ချိန်မှာ အားအလွန်ပြင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း ဖြစ်လိမ့်လို့ အိန္ဒိယ မိုးလေဝသဌာနက ဆိုပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို မိုင် ၁၂၀ လောက်နဲ့ လာပြီး မုန်တိုင်း ဒီရေတွေက နှစ်ထပ်အိမ် အမြင့်လောက် ရှိလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထဝီအနေအထားက မုန်တိုင်းတွေကို ပိုဆိုးစေ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဟာ မုန်တိုင်းဒီရေတက်တာအဆိုးဆုံး ပထဝီအနေအထားကို တိတိကျကျ နမူနာပြနိုင်မယ့် နေရာပါလို့ Weather Underground အဖွဲ့က မိုးလေဝသ ပညာရှင်နဲ့ စာရေးဆရာ ဘော့ဘ်ဟန်ဆန်က ပြောပါတယ်။
အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေတာက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အပေါ်ပိုင်းက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ အပူချိန်တွေပါ။ အဲဒါက အလွန့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်သွားစေတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
လူနေတော်တော်ထူထပ်တဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဖြစ်တာကြောင့်လည်း ဒီအန္တရာယ်ကို ပိုဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်းက တစ်နာရီ လေတိုက်နှုန်း အများဆုံး ၁၃၇ မိုင်အထိ တိုက်နိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေ အမျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မုန်တိုင်း လေပြင်းက အပျက်အစီးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီရေလှိုင်းတွေနဲ့ မိုးကြီးတာတွေကြောင့်တော့ ရေကြီးရေလျှံတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
အမ်ဖန် ဆိုင်ကလုန်း ဝင်တော့မှာမို့ အိန္ဒိယမှာ လူသန်းပေါင်းများစွာကို ကယ်ထုတ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေရ
ဒါကြောင့် မုန်တိုင်းခိုတွေမှာ သွားနေရမယ့် သူတွေ ခပ်ခွာခွာ နေလို့ရအောင် မုန်တိုင်းခိုတွေနဲ့ နေရာတွေ ပိုလိုပါတယ်။
အာရေဘီယံပင်လယ်နဲ့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ တိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေထဲ့က တချို့ပဲ ဆူပါဆိုင်ကလုန်းအဆင့်အထိ ပြင်းအားနဲ့ တိုက်တာပါ။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုတိုင်းမှာ တစ်ခုနှုန်း လောက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက မုန်တိုင်းဒီရေတွေ ၃၄ ပေ အမြင့်ထိ ကမ်းရိုးတန်းကို တက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းကို တိုက်ခဲ့တဲ့ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် အနည်းဆုံး လူ တစ်သိန်းလေးသောင်းလောက် သေပျောက်ခဲ့ပြီး လူနှစ်သန်း ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အမ်ဖန်လို မုန်တိုင်းကြီးတွေ ဘာကြောင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကို အဝင်များနေတာလဲ